Maali: Gabadh Yar Oo U Geeriyootay Cudurka Ebola | Somaliland Today
← “Sool Iyo Sanaag Waxay Puntland Uga Mid Yihiin, Sida Garoowe Oo Kale” Madaxwaynaha Puntland
Askar Masaari Ah Oo La Dilay Iyo bandoo Lagu Soo Rogay Gacanka Siinaay →
Maali: Gabadh Yar Oo U Geeriyootay Cudurka Ebola
SLT-Mali)-Dowladda Mali ayaa xaqiijisay in gabadh 2- jir ahayd oo uu ku dhacay Ebola ay dhimatay.
Gabadha ayaa ka soo safartay dalka Guinea, waxayna la socotay ayeeyeed xilligii lagu arkayay calaamadaha cudurka.
Wa kiiskii ugu horeeyay ee Ebola ee lagu arko dalka Mali. Waxaa la aaminsan yahay in Hooyadeed ay cudurka ugu dhimatay dalka Guinea oo ah mid ka mid ah dalalka uu sida xun u saameeyay xanuunku. Ayeydeed oo ka qeyb-gashay aaska, ayaa markii dambe gabadhan yar u soo kaxeysay dalka Mali.
Safar 700-mile ah oo ay gashay gabadhan ayaa soo raacday gawaadhida dad weynaha ayaa walaac aad u ballaadhan abuuray.
Sankeeda dhiig ayaa ka socday markii gabadha lageeynayay Isbitaalka, WHO ayaa sheegtay in ay suura-gal tahay in gabadhu ay dad badan ay qaadsiisay caabuqa. In kabadan afartan qof oo ay ku jiraan 10-shaqaale caafimaad ayaa la baaray.
Balse baadi goobka dad kale oo laga yaabo in bukaanta jirkoodu ay taabteen xilligii ay safarka ku jirtay ayaa caqabad noqon karta.
Kiiskan lagu arkay Mali layaab malahan, sababtoo ah xuduudaha gobolka ayaa weli isufuran, waana caadi in ay qoysasku isaga gudbaan labo dal.
Si kastaba ha ahaatee dalalka galbeedka afrika ayaa feejignaan sare ku jira, dalalka uusan Ebola saameynina isha ayay ku hayaan inay ogaadaan kiiskaste xilli hore ayna xakameeyaan faafidda cudurka.